အလန်းစား ပြည်တွင်းပြည်ပကအနုပညာရှင်တွေနဲ့အတူ သင်္ကြန်လေးရက်လုံးကဲနိုင်စေဖို့...
အလန်းစား ပြည်တွင်းပြည်ပကအနုပညာရှင်တွေနဲ့အတူ သင်္ကြန်လေးရက်လုံးကဲနိုင်စေဖို့…
3 Apr 2018 . 2:49 PM
မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ပွဲတော်တွေထဲကမှ ပြည်သူတွေအပျော်ဆုံးနဲ့ အနုပညာရှင်တွေရော ပရိသတ်ပြည်သူတွေပါ အားလုံးပါဝင်ကာဆင်နွှဲလေ့ရှိတဲ့ သင်္ကြန်ပွဲတော်ကတော့ မကြာခင်မှာ ရောက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်္ကြန်ပိတ်ရက်လေးရက်မှာ ဘယ်မှာကဲကြမလဲ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပက အလန်စားအနုပညာရှင်တွေနဲ့အတူ အပြတ်ကဲနိုင်ဖို့ ပြည်လမ်းပေါ်မှာရှိနေမယ့် Thingyan Music Festival – TMF နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
သင်္ကြန်လေးရက်လုံးမှာ မတူညီတဲ့အနုပညာရှင်တွေက မတူညီတဲ့ဖျော်ဖြေမှုပုံစံတွေနဲ့အတူ ဖျော်ဖြေပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေကလည်း သူတို့နဲ့အတူတူ ပါဝင်ပြီးကဲနိုင်ဖို့ လက်မှတ်များကိုလည်း မတ်လ ၁၀ ရက်နေ့ကတည်းက ရောင်းချပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ… ဧပြီ ၁၃ အကြိုနေ့မှာတော့ မြန်မာမိန်းကလေးဒီဂျေတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Talented DJ လို့လည်း အသိများတဲ့ P4၊ Progressive House တွေနဲ့ဖျော်ဖြေမယ့် EMJ၊ Mr.Hypeman တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ BIGGY WYNE ရဲ့မနက်ပိုင်းဖျော်ဖြေမှု၊ ညနေပိုင်းမှာတော့ ပြည်တွင်းပွဲတော်တွေမှာ ပရိတ်သတ်အခိုင်အမာရှိထားပြီး ရန်ကုန်မြို့ရဲ့နာမည်ကျော် FUSE ရဲ့ Resident DJs တွေဖြစ်တဲ့ Kitty ၊ HANE၊ မိန်းကလေးပရိသတ်တွေအများအပြားရရှိထားတဲ့ BG ၊ Blacklix ရဲ့ B2B Session အပြင် The Bugbears အဖွဲ့ရဲ့အမိုက်စားဖျော်ဖြေမှု၊ နောက်ဆုံးအကြိုနေ့ရဲ့ အပိတ်မှာတော့ ရုရှားနိုင်ငံမှကမ္ဘာ့ကျော် Shapov ရဲ့ဖျော်ဖြေမှုနဲ့အတူ ပြီးဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဧပြီ ၁၄ အကျနေ့ရဲ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ တက်သစ်စလူငယ် Y3LLO ရဲ့ဂီတဖျော်ဖြေမှုနဲ့အတူ စတင်မှာဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းစတားတွေဖြစ်ကြတဲ့ HANE နဲ့ S Logic တို့က ဆက်လက်ဖျော်ဖြေသွားမှာဖြစ်ကာ၊ ညနေပိုင်းမှာတော့ EMJ ဖျော်ဖြေမှုအပြင် DJ ရဲ့ဆရာတစ်ဆူဖြစ်တဲ့ Icez လည်းပါဝင်ပြီး၊ Terror Bass ကလည်း ထပ်မံအားဖြည့်ကာ ဖျော်ဖြေသွားမှာပါ။ အကျနေ့အပိတ်မှာတော့ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း TOP 10 Hardstyle DJs စာရင်းဝင် Atmozfears အပါအဝင် EDM Fans တွေတောင့်တာနေကြတဲ့ ကမ္ဘာကျော် DJ/Producer ညီအစ်မ ၂ယောက်ဖြစ်တဲ့ Krewella တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဧပြီ၁၅ အကြတ်နေ့မှာတော့ ပြည်တွင်းကစူပါစတားတော်တော်များများပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မနက်ပိုင်းဖျော်ဖြေမှုမှာပါဝင်မယ့် BEASTS ၊ past12 နဲ့ The Kendrick ဖြစ်ကာ၊ ညနေပိုင်းမှာတော့ Hip Hop Beat အလန်းတွေနဲ့ ဖျော်ဖြေမယ့် Mr.Y၊ Raw Trap နဲ့အမုန်းကျဲမယ့် OUJ အပြင် DJ လောကရဲ့ ဆရာတစ်ဆူဖြစ်တဲ့ Double U တို့က အားဖြည့်ပါဝင်ဖျော်ဖြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ညနေအပိတ်မှာတော့ ပြည်ပကစူပါစတားတွေဖြစ်တဲ့ LNY TNZ၊ Sophie Francis နဲ့ မြန်မာ Ravers တွေ အများဆုံးမျှော်လင့်နေကြတဲ့ Yellow Claw တို့က ပါဝင်ဖျော်ဖြေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ…နောက်ဆုံးဧပြီ ၁၆ ရက်အတက်နေ့မှာတော့ အလန်းဆုံးနဲ့အကြမ်းဆုံးကဲနိုင်ဖို့ ပါဝင်မယ့်သူတွေကတော့ FUSE ရဲ့ Resident Lady DJ တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Kitty၊ Trap Music အလန်းတွေနဲ့ SKIMM၊ Special B2B Performance အနေနဲ့ BG နဲ့ Blacklix တို့က ပူးပေါင်းဖျော်ဖြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ညနေပိုင်းမှာတော့ Fred၊ Progressive Groove Beats တွေနဲ့ The Bugbears အပါအဝင်အမိုက်စားဖျော်ဖြေမှုတွေနဲ့ Dynamite တို့က ဖျော်ဖြေသွားမှာဖြစ်ကာ၊ နောက်ဆုံးအပိတ်အနေနဲ့ကတော့ Ummet Ozcan နဲ့ Brennan Heart တို့ရဲ့ ထူးထူးခြားခြားတင်ဆက်မှုတွေနဲ့ ပိတ်သိမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်။
မနှစ်ကနဲ့မတူတဲ့ တကယ်ကိုအလန်းစားဖျော်ဖြေမှုတွေနဲ့ ကဲနိုင်ဖို့ လက်မှတ်ဈေးနှုန်းတွေနဲ့ လက်မှတ်ဝယ်ယူရမယ့်နေရာတွေကို အသေးစိတ်သိလိုပါက Thingyan Music Festival – TMF ပေ့ခ်ျမှာ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ပိတ်ရက်သင်္ကြန်လေးရက်မှာ အလန်းဆုံးကဲနိုင်ကြပါစေနော်….
Photo Credit:Thingyan Music Festival – TMF
အလနျးစား ပွညျတှငျးပွညျပကအနုပညာရှငျတှနေဲ့အတူ သင်ျကွနျလေးရကျလုံးကဲနိုငျစဖေို့…
မွနျမာနိုငျငံမှာရှိတဲ့ ပှဲတျောတှထေဲကမှ ပွညျသူတှအေပြျောဆုံးနဲ့ အနုပညာရှငျတှရေော ပရိသတျပွညျသူတှပေါ အားလုံးပါဝငျကာဆငျနှဲလရှေိ့တဲ့ သင်ျကွနျပှဲတျောကတော့ မကွာခငျမှာ ရောကျရှိလာတော့မှာဖွဈပါတယျ။ သင်ျကွနျပိတျရကျလေးရကျမှာ ဘယျမှာကဲကွမလဲ၊ ပွညျတှငျးပွညျပက အလနျစားအနုပညာရှငျတှနေဲ့အတူ အပွတျကဲနိုငျဖို့ ပွညျလမျးပျေါမှာရှိနမေယျ့ Thingyan Music Festival – TMF နဲ့ မိတျဆကျပေးခငျြပါတယျ။
သင်ျကွနျလေးရကျလုံးမှာ မတူညီတဲ့အနုပညာရှငျတှကေ မတူညီတဲ့ဖြျောဖွမှေုပုံစံတှနေဲ့အတူ ဖြျောဖွပေေးသှားမှာဖွဈပွီး ပရိသတျတှကေလညျး သူတို့နဲ့အတူတူ ပါဝငျပွီးကဲနိုငျဖို့ လကျမှတျမြားကိုလညျး မတျလ ၁၀ ရကျနကေ့တညျးက ရောငျးခပြေးနတောဖွဈပါတယျ။
ကဲ… ဧပွီ ၁၃ အကွိုနမှေ့ာတော့ မွနျမာမိနျးကလေးဒီဂတြေဈဦးဖွဈတဲ့ Talented DJ လို့လညျး အသိမြားတဲ့ P4၊ Progressive House တှနေဲ့ဖြျောဖွမေယျ့ EMJ၊ Mr.Hypeman တဈဦးဖွဈတဲ့ BIGGY WYNE ရဲ့မနကျပိုငျးဖြျောဖွမှေု၊ ညနပေိုငျးမှာတော့ ပွညျတှငျးပှဲတျောတှမှော ပရိတျသတျအခိုငျအမာရှိထားပွီး ရနျကုနျမွို့ရဲ့နာမညျကြျော FUSE ရဲ့ Resident DJs တှဖွေဈတဲ့ Kitty ၊ HANE၊ မိနျးကလေးပရိသတျတှအေမြားအပွားရရှိထားတဲ့ BG ၊ Blacklix ရဲ့ B2B Session အပွငျ The Bugbears အဖှဲ့ရဲ့အမိုကျစားဖြျောဖွမှေု၊ နောကျဆုံးအကွိုနရေဲ့ အပိတျမှာတော့ ရုရှားနိုငျငံမှကမ်ဘာ့ကြျော Shapov ရဲ့ဖြျောဖွမှေုနဲ့အတူ ပွီးဆုံးမှာဖွဈပါတယျ။
ဧပွီ ၁၄ အကနြရေဲ့မနကျပိုငျးမှာတော့ တကျသဈစလူငယျ Y3LLO ရဲ့ဂီတဖြျောဖွမှေုနဲ့အတူ စတငျမှာဖွဈပွီး ပွညျတှငျးစတားတှဖွေဈကွတဲ့ HANE နဲ့ S Logic တို့က ဆကျလကျဖြျောဖွသှေားမှာဖွဈကာ၊ ညနပေိုငျးမှာတော့ EMJ ဖြျောဖွမှေုအပွငျ DJ ရဲ့ဆရာတဈဆူဖွဈတဲ့ Icez လညျးပါဝငျပွီး၊ Terror Bass ကလညျး ထပျမံအားဖွညျ့ကာ ဖြျောဖွသှေားမှာပါ။ အကနြအေ့ပိတျမှာတော့ ကမ်ဘာ့ထိပျတနျး TOP 10 Hardstyle DJs စာရငျးဝငျ Atmozfears အပါအဝငျ EDM Fans တှတေောငျ့တာနကွေတဲ့ ကမ်ဘာကြျော DJ/Producer ညီအဈမ ၂ယောကျဖွဈတဲ့ Krewella တို့ပဲဖွဈပါတယျ။
ဧပွီ၁၅ အကွတျနမှေ့ာတော့ ပွညျတှငျးကစူပါစတားတျောတျောမြားမြားပါဝငျမှာဖွဈပါတယျ။ မနကျပိုငျးဖြျောဖွမှေုမှာပါဝငျမယျ့ BEASTS ၊ past12 နဲ့ The Kendrick ဖွဈကာ၊ ညနပေိုငျးမှာတော့ Hip Hop Beat အလနျးတှနေဲ့ ဖြျောဖွမေယျ့ Mr.Y၊ Raw Trap နဲ့အမုနျးကြဲမယျ့ OUJ အပွငျ DJ လောကရဲ့ ဆရာတဈဆူဖွဈတဲ့ Double U တို့က အားဖွညျ့ပါဝငျဖြျောဖွသှေားမှာဖွဈပါတယျ။ ညနအေပိတျမှာတော့ ပွညျပကစူပါစတားတှဖွေဈတဲ့ LNY TNZ၊ Sophie Francis နဲ့ မွနျမာ Ravers တှေ အမြားဆုံးမြှျောလငျ့နကွေတဲ့ Yellow Claw တို့က ပါဝငျဖြျောဖွပေေးသှားမှာဖွဈပါတယျ။
ကဲ…နောကျဆုံးဧပွီ ၁၆ ရကျအတကျနမှေ့ာတော့ အလနျးဆုံးနဲ့အကွမျးဆုံးကဲနိုငျဖို့ ပါဝငျမယျ့သူတှကေတော့ FUSE ရဲ့ Resident Lady DJ တဈယောကျဖွဈတဲ့ Kitty၊ Trap Music အလနျးတှနေဲ့ SKIMM၊ Special B2B Performance အနနေဲ့ BG နဲ့ Blacklix တို့က ပူးပေါငျးဖြျောဖွသှေားမှာဖွဈပါတယျ။ ညနပေိုငျးမှာတော့ Fred၊ Progressive Groove Beats တှနေဲ့ The Bugbears အပါအဝငျအမိုကျစားဖြျောဖွမှေုတှနေဲ့ Dynamite တို့က ဖြျောဖွသှေားမှာဖွဈကာ၊ နောကျဆုံးအပိတျအနနေဲ့ကတော့ Ummet Ozcan နဲ့ Brennan Heart တို့ရဲ့ ထူးထူးခွားခွားတငျဆကျမှုတှနေဲ့ ပိတျသိမျးမှာဖွဈပါတယျ။
မနှဈကနဲ့မတူတဲ့ တကယျကိုအလနျးစားဖြျောဖွမှေုတှနေဲ့ ကဲနိုငျဖို့ လကျမှတျဈေးနှုနျးတှနေဲ့ လကျမှတျဝယျယူရမယျ့နရောတှကေို အသေးစိတျသိလိုပါက Thingyan Music Festival – TMF ပခြေျ့မှာ ဝငျရောကျလလေ့ာနိုငျပါတယျ။ ပိတျရကျသင်ျကွနျလေးရကျမှာ အလနျးဆုံးကဲနိုငျကွပါစနေျော….